कक्षा ११ मा कुन विषय पढ्ने?
कक्षा ११ पढ्न योग्य भाग्यमानी छात्र/छात्राहरूलाई ब्रिलियन्ट कलेजको हार्दिक बधाइ ! तपाईँ भाइबहिनीहरुले एस.ई.ई. परीक्षा सकुशल उत्तीर्ण गरिसक्नुभएको छ । तपाई भाइबहिनीहरुका मुखमा हाँसो र मनमा अपार उत्साह बढेको छ अनि तपाईँ भाइबहिनीहरुलाई सगरमाथाको टुप्पामा पुगेको अनुभव भइरहेको छ एस.ई.ई. पास गर्दा । फेरि एक चोटि तपाईँको त्यो हँसिलो अनुहार, त्यो उत्साही मन र त्यो सगरमाथाको टुप्पामा पुगेको आकाङ्क्षालाई ब्रिलियन्ट एजुकेसनल मा.वि./बहुमुखी क्याम्पसको हार्दिक बधाइ !
भाइबहिनीहरु ! एस.ई.ई. उत्तीर्णसँगै तपाईँको काँधमा ठूलो जिम्मेबारी थपिएको छ । त्यो जिम्मेबारी भनेको भित्री रुचिअनुसारको विषय छनोट गर्ने र मा.वि. स्तरीय उच्च शिक्षा लिने । यो कठिन जिम्मेबारी तपाईँको कलिलो काँधमा आइपरेको छ । यति बेला तपाईँलाई परिवारको डर, समाजको कर, साथीभाइहरूको लहलहै र आफ्नो मनको रहरले अन्योल सिर्जना गरिदिएका छन् । तपाईँ चौबाटामा उभिएको दिग्भ्रमित यात्रीझैँ मूल गन्तव्य पहिचान गर्न नसकेर अल्मलिरहनुभएको छ । तपाईँका अगाडि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र अन्य प्राविधिक/व्यावसायिक विषयहरू खडा भएका छन् । तपाईँ एकैचोटि यी सबै विषय रोज्न सक्नुहुन्न । रोजे पनि पढ्न सक्नुहुन्न । तपार्इँका मनमस्तिष्कमा के पढ्ने र के बन्ने भन्ने कुराले अन्योल सिर्जना गरेको छ । तपाईँले पीर मान्नु पर्दैन । उपाय सजिलो छ । त्यो उपाय हो— रहरले विषय रोज्ने । इच्छाअनुसारको शिक्षा रोज्ने तपाईँले यतिबेला बुबाआमाको खल्तीको अवस्था बुझ्न पनि आवश्यक छ । घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने उखानको अर्थ त तपाईँले स्कुलमै बुझिसक्नुभएको छ । विषय रोज्दा भोलिको अवसरलाई पनि हेक्का राख्दा सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यसरी तपाईँले मनको रुचि, बुबाआमाको आर्थिक क्षमता र भोलिको बहुआयामिक अवसरबिच तालमेल मिलाएर विषय छनोट गरेमा जीवनमा पछाडि फर्कनु पर्दैन । सफलताबाहेक अरु केही हात लाग्दैन । विषय जुन पढे पनि हुन्छ तर त्यसमा उत्कृष्ट हुनुपर्दछ । विषय आपैmँमा साना ठूला हुँदैनन् । विषयलाई उत्कृष्ट विद्यार्थीको सुरुचिपूर्ण पढाइले बनाउने हो । राम्रो पढेन भने विज्ञान पढेर पनि काम लाग्दो हुँदैन । राम्रो पढ्यो भने शिक्षा पढेर पनि उत्कृष्ट मानिस बन्न सकिन्छ । उत्कृष्टता विषयमा हुँदैन, विषयको गहिराइपूर्ण अध्ययनमा हुन्छ ।
भाइबहिनीहरु ! तपाईँहरुका अगाडि कक्षा ११ कुन मा.वि. पढ्ने भन्ने अन्योल पनि छ । धेरैले साथीको लहलहैमा लागेर मा.वि. छनोट गर्ने गरेका छन् । यो ११ कक्षा पढ्ने मा.वि. छनोटको उत्कृष्ट तरिका होइन । तपाईँ भाइबहिनीहरुले विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पढाउने समर्पित शिक्षकशिक्षिका, सहयोगी कर्मचारी; प्रेम, प्रेरणा र प्रोत्साहन भर्ने प्रशासन एवम् पढाइ नै जीवन हो भन्ने विद्यार्थी जमात भएको मा.वि. छान्नु पर्दछ । उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्न बिर्सनु हुँदैन । पढ्ने र गर्ने आफैँले हो । वातावरण मात्रै कलेजहरुले दिने हुन् । बाबुआमाको आर्थिक अवस्थाले नधान्ने कलेज छान्नु पनि बुद्धिमानी होइन । नाम र ठाउँ परिवर्तन हुने खालका मा.वि. सकेसम्म छान्नु हुँदैन । स्थायित्व भएको मा.वि. छान्नु पनि बुद्धिमानी हो ।
भाइबहिनीहरु ! अब अलिकति ब्रिलियन्ट बुझौं । यो २०५७ सालमा स्थापना भएको Private College हो । यसले शुल्कमा न्यूनता, शिक्षामा स्तरीयताः हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल आदर्श आत्मसात् गरेको छ । यस कलेजमा ७० भन्दा बढी जिल्लाका शिक्षाप्रति गहिरो रुचि भएका जिज्ञासु र अनुशासित हजारौं छात्र/छात्राहरू अध्ययनरत छन् । यहाँ व्यवस्थापन (Management), मानविकी (Humanities) र शिक्षाशास्त्र (Education) सङ्कायको पठनपाठन हुन्छ । यहाँ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । यहाँ Computer Science, Hotel Management, Mass Communication and Journalism र Cooperative Management जस्ता प्राविधिक र व्यावसायिक विषयको प्रयोगात्मक विधिबाट पठनपाठन हुँदै आएको छ । यहाँ राम्रो पढाइ भएका छात्र/छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ । यसको आफ्नै निजी भवन छ । गुणस्तरीय Hotel Management Kitchen, Housekeeping, Bar र Computer Lab रहेका छन् । प्रेम, प्रेरणा र प्रोत्साहनपूर्ण पारिवारिक शैक्षिक वातावरण रहेको छ । विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पठनपाठन गर्ने समर्पित प्राध्यापकहरू छन् । विद्यार्थीका समस्यालाई छिटोछरितोसँग समाधान गरिदिने कर्मचारी छन् । मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेबारी र हृदयमा खचाखच इमानदारी भएका संस्थापक व्यवस्थापक छन् । यसको एउटै छातामुनि कक्षा एघारदेखि डिग्रीसम्मको पढाइ भइरहेको छ । साधारण शुल्कमा सबै तहमा उत्कृष्ट नतिजा रहेको छ । त्यसैले यो उच्च मा.वि. Management, Humanities र Education पढ्ने कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहसम्मका छात्र/छात्राहरूको प्रिय कलेज बनेको छ । भर्खरै एस.ई.ई. उत्तीर्ण गर्नुभएका तपाईँ भाइबहिनीहरूको पनि कक्षा ११ पढ्ने रोजी कलेज बन्ने पक्का छ । यसमा सन्देह छैन ।
अन्त्यमा, ब्रिलियन्टको सुनाम र न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको महान् अभियान चाल पाएर यसको प्राङ्गणमा पवित्र पाइला राख्ने विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू एवम् शुभचिन्तकज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत ! जय ब्रिलियन्ट ! जय ब्रिलियन्ट छात्र/छात्राहरू ! जय न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको ब्रिलियन्ट अभियान !
Author isaPrincipal/Campus Chief of Brilliant Multiple Campus, Siphal, Chabel.
जगत्गुरु कोरोना भाइरसको पत्र : विश्व मानवलाई